Wednesday March 25, 2020 - 18:54:45 in Wararka by Super Admin
Warar hordhac ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weerarka oo ahaa mid naf hurnimo "Camaliyad istish-haadi ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta Baarlamaanka dawaaqiidda waxaa ku dhintay 9 kamid ah Murtadiinta 24 kalane dhaawacyo ayaa kasoo gaaray" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerarka lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo saraakiil ciidan ay ku sugnaayeen meel ku dhow xarunta madaxtooyada, weerarka ayaa dhacay xili saraakiisha dowladda ay ku mashquulsanaayeen cunidda maandooriyaha Khaatka.
Qaraxn oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir goobta uu ka dhacay ayaa ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyaa waana goob ay aad ugu badanyihiin askarta iyo saraakiisha dowladda qeybahooda kala duwan.
Xukuumadda Xasan Cali Kheyre ayaa umuuqata in ay ku fashilantay sugidda ammaanka caasimadda gaar ahaan xayndaabka madaxtooyada oo inta badan ay ka dhacaan weerarada waaweyn.